သူငယျပွနျခွငျးအတှကျ တရားရအေေး - ApannPyay Media
ခွောကျဆယျကြျောပွီ ဆိုကတညျးက ဇရာရဲ့ အရိပျအယောငျတှေ ပိုတှလေ့ာကွရပွီ ။ ဆံပငျတှကေတော့ ဖွူတာကွာပါပွီ ။ရှေးတုနျးက ဘုရငျတဈပါးလို ဆံပငျဖွူတဈခြောငျးတှလေို့ သံဝဂေရပွီး တောထှကျမယျဆိုရငျတော့ တောတှငျးသားဖွဈတာ ကွာလှရောပေါ့ ။
ဒါပမေဲ့ သံဝဂေယူမဲ့အစား ဆံပငျနကျဆေးလေးဆိုး၊ အဆငျနုနုလေးတှဝေတျပွီး ”မအိုသေးတဲ့လူ.. လူပြိုလေးနဲ့တူ” ဆိုပွီး ဇရာကို လှညျ့စားခဲ့တာပါပဲလေ ။
အခုတော့ ဆံပငျတငျမက မကျြခုံးမှေးတှပေါ ဖွူလာပွီ ။ ဇရာကို လိမျဖို့ခကျလာပွီ ။ မကျြခုံးမှေးဆိုတာ ဆေးဆိုးလို့မှ မရပဲလေ ။ ဆိုးရငျတော့ အမြိုးသမီးတှေ မကျြခုံးမှေးဆှဲထားသလို ဖွဈသှားမှာပါပဲ ။
လူကလညျး အားအငျဆုတျယုတျလို့ ခညျြ့နဲ့နဲ့ ဖွဈလာပွီ ။ စိတျသှားတိုငျး ကိုယျမပါတော့ ။ အိုမငျးမစှမျးဆိုတာ အိုလာရငျ မငျးမစှမျးတော့ဘူးလို့ ဆိုလိုမှနျး သိလာပွီ ။
ဇရာရဲ့ အပျေါယံသှငျပွငျ လက်ခဏာတှကေို ဘယျလိုပဲ ဖုံးကှယျ ဖုံးကှယျ ၊ ပွုပွငျ ပွုပွငျ ဇရာဆိုတဲ့ အိုမငျးခွငျးဟာ ဇီဝကမ်မဗဒေဆိုငျရာ ပွောငျးလဲမှုတဈခုဆိုတော့ မလှဲမသှေ ရောကျလာမှာပါပဲ ။
ဇာတိ ဇရာ မရဏ ဆိုတာ လောကဓမ်မတာ မဟုတျလား ။ ဘုရား ရဟန်တာတောငျ ရှောငျလှဲလို့ မရဘူးလေ ။ဒီတော့ ကိုယျလညျး အိုရမှာ အသအေခြာပဲပေါ့ ။ ဒါ ကွောငျ့ ဇရာကို ရှောငျပုနျးနမေဲ့အစား ရငျဆိုငျဖို့ ပွငျဆငျတာက အကောငျးဆုံးပါပဲ ။
ဇရာအိုပမေဲ့လညျး နညေိုခြိနျမှာ တငျ့တငျ့တယျတယျ နနေိုငျဖို့ ၊ ဇရာဒုဗ်ဗလအရှယျမှာ စိတျရှငျသနျ လနျးဆနျးနဖေို့ ငါအိုပွီဆိုတာကို မှနျမှနျကနျကနျ လကျခံနိုငျဖို့လိုပါတယျ ။
အမတျတှေ အလြော့ပေး မွှောကျပေးတာကို အဟုတျမှတျသှားတဲ့ အလောငျးစညျသူမငျးကွီးလို လကျရုံးတျောဆနျ့တနျးပွီး ”…ငါမအိုသေး ”လို့ ကွုံးဝါးနလေို့ မဖွဈပါဘူး ။ လကျပဉျြးတျောတှဲကနြတောကို ကွညျ့ကွပွီး ရယျခိုးဖှဲ့ ခံရမှာပါပဲ ။
ရှိခဲ့တဲ့ အခှငျ့အာဏာကို မစှနျ့ခငျြလို့ သားသမီးတှကေို ဟိုလူ့မာနျ ဒီလူ့မဲ လုပျနရေငျ ၊ ရှထေီးဆောငျးခဲ့တဲ့ အတိတျအကွောငျးတှကေိုပဲ ထပျတလဲလဲ ပွောနရေငျ ၊ ဘယျပွဿနာမြိုးမဆို ကိုယျသာဖွရှေငျးနိုငျတယျလို့ စိတျကွီးဝငျနရေငျတော့ လူတှနေဲ့ ပဋိပက်ခဖွဈပွီး ကိုယျ့ကို ဝေးဝေးရှောငျကွမှာပါပဲ ။
အထီးကနျြဖွဈခွငျးဆိုတဲ့ ဇရာရဲ့ အကွီးဆုံး ဒုက်ခကို ရငျဆိုငျသှားရနိုငျပါတယျ ။ ဒီတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျပဲ ဗဟိုပွုမနမှေ ၊ နရောတိုငျး ဝငျပါပွီး သွဇာပေးတာတှကေို ဆငျခွငျမှ လူတှနေဲ့ အဆငျပွပွေေ ဆကျဆံနိုငျပွီး အထီးကနျြဒုက်ခက လှတျကငျးမှာပါ ။
ပွီးတော့ လူတှကွေားထဲ ထငျထငျပျေါပျေါ ဖွဈအောငျ ကွိုးစားနမေဲ့အစား တဈဦးတညျး ငွိမျးငွိမျးခမျြးခမျြး နရေတဲ့ အရသာကို သဘောကတြတျဖို့လညျး လိုပါတယျ ။အေးခမျြးဆိတျငွိမျတဲ့ နရောလေးမှာ ကိုယျနှဈသကျတဲ့ စာလေး အေးအေးဆေးဆေးဖတျရငျး ၊ စာလေးရေးရငျးနဲ့ပေါ့ ။
ကဗြာတို့ ၊ စာပေ ဂီတတို့မှာ စိတျဝငျစားတတျရငျတော့ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ စာပနေဲ့ဂီတက ဇရာကွောငျ့ အိုမငျးရှတျတှ အကညျြးတနျနတေဲ့ လကျရှိကမ်ဘာကနေ သာယာဆနျးကွယျတဲ့ ကမ်ဘာသဈဆီကို ချေါဆောငျသှားနိုငျသတဲ့ ။
ဇရာမှာ ကွောကျစရာအကောငျးဆုံးကတော့ သတိမလြေ့ော့လာတာပါပဲ ။ ငယျငယျက ဉာဏျဘယျလောကျပဲ ကောငျးခဲ့ ကောငျးခဲ့ အခုတော့ ဟိုမဒေီ့မေ့ ဖွဈစပွုနပွေီ ။
ဇရာရဲ့ ဒဏျခကျြကွောငျ့ ဦးနှောကျကလပျစညျးတှေ ယိုယှငျးပကျြစီးစ ပွုလာပွီ မဟုတျလား ။ ပွုပွငျထိနျးသိမျးမှု မရှိရငျတော့ သူငယျပွနျတာမြိုး ဖွဈသှားနိုငျပါတယျ ။
တခြို့ သကျကွီးရှယျအိုကွီးတှေ အဓိပ်ပါယျမဲ့ စကားတှကေို အရှကျအကွောကျမရှိ ပရမျးပတာ ပွောလိုပွော ၊ မတျောမလြျောတှေ ဝတျစားလိုဝတျစားနဲ့ ဖွဈလာရငျ သူငယျပွနျပွီဆိုပွီး လူတှကေဲ့ရဲ့တတျကွပါတယျ ။
တခြို့ကတော့ စားပွီးသားကို မလြေ့ော့သှားပွီး မစားရသေးဘူး ပွောရုံ ၊ ပွောပွီးသား စကားတှကေို ထပျတလဲလဲ ပွောရုံလောကျ သိမျသိမျမှမှေ့ေ့ သူငယျပွနျပမေဲ့ တခြို့ကတြော့ ကလေးတှနေဲ့ ရောနှောပွီး အိုးပုတျ ခြိုးရုပျတှနေဲ့ ကစားလိုကစား ၊ အလိုမပွညျ့တဲ့အခါမြိုးမှာ ကလေးလိုပဲ ခွဆေငျးလူးလှိမျ့ငိုယိုနဲ့ မွငျရတာကိုက ရှံစရာကွီးပါ ။
မတျောမလြျောတှပေါ လုပျမယျ ပွောမယျဆိုရငျတော့ ပိုဆိုးတော့တာပေါ့ ။
သူငယျပွနျတာ အလှနျအကြှံဖွဈလာတဲ့ သူမြားဆိုရငျ သားတှေ ၊ သမီးတှကေိုလညျး မမှတျမိတော့ဘူးတဲ့ ။ အလေး. အပေါ့ စှနျ့လို့စှနျ့မိမှနျးလညျးမသိတော့ဘူးတဲ့ ။အတူနသေူ သားသမီးမြားအတှကျ အတေျာ့ကို ဒုက်ခမြားစမှောပါပဲ ။
သူငယျပွနျတယျလို့ ယဉျယဉျကြေးကြေး ပွောကွပမေဲ့ တကယျတော့ ရူးသှပျခွငျး တဈမြိုးပါပဲ ။ အသကျကွီးပွီး အိုမငျးရငျ့ရျောလာလို့ နာဗျကွော အာရုံကွောတှေ ပကျြစီးလာတဲ့အတှကျ နာမျပိုငျးဆိုငျရာ ခြှတျယှငျးမှု ဖွဈလာတာကွောငျ့ပါ ။ ဆေးဝါးတှနေဲ့လညျး ကုလို့မရပါဘူး ။
သူငယျပွနျတယျဆိုတာ အလှနျရှကျစရာ ကွောကျစရာ ကောငျးပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ သူငယျပွနျတဲ့ အဖွဈဆိုးနဲ့ ကငျးဝေးအောငျ ကွိုတငျပွငျဆငျထားရမှာပါပဲ ။
ငယျစဉျတုနျးက မူးယဈဆေးဝါး အရကျသစော မှီဝဲခဲ့လို့ရှိရငျ အိုမငျးမစှမျးဖွဈလာတဲ့အခါ သူငယျပွနျတတျသတဲ့ ။ နောကျပွီး စိတျပိုငျးဆိုငျရာ လလေ့ာပှားမြားမှု မရှိရငျလညျး သူငယျပွနျတတျသတဲ့ ။
ဒါကွောငျ့ ကွိုတငျပွီး ရှောငျစရာရှိတာရှောငျ ၊ ဆောငျစရာရှိတာဆောငျဖို့ လိုပါတယျ ။
”သတိပဋ်ဌာနျတရား ပှားမြားလြှငျ သတိမလြေ့ော့ခွငျး ၊ သူငယျပွနျခွငျး မဖွဈနိုငျ ” လို့ အမရပူရမွို့ ၊ မဟာဂန်ဓာရုံဆရာတျော အဂ်ဂမဟာပဏ်ဍိတ အရှငျဇနကာဘိဝံသက မိနျ့ကွားခဲ့ဖူးပါတယျ ။
သူငယျပွနျတယျဆိုတာ လူ့လောကမှာ ရှကျစရာ ရှံရှာစရာတငျမကပါဘူး နောကျဆုံး ဘဝတုံးတဲ့အထိ တှတှေဝေဝေနေဲ့ ဇာတျသိမျးသှားတတျပါတယျ ။
ကုသိုလျကောငျးမှုလညျး လုပျဖို့ မလှယျတော့ပါဘူး ။ တှဝေမေိနျးမောပွီး သမှောဆိုတော့ ကောငျးရာသုဂတိရောကျနိုငျဖို့လညျး မရှိတော့ပါဘူး ။ အပါယျဒုဂ်ဂတိသာ ရောကျရတော့မှာပါ ။ တှေးကွညျ့ရငျ ကွောကျစရာပါပဲ ။
ဒါကွောငျ့ သတိမလြေ့ော့ခွငျးကို အခွခေံတဲ့ သူငယျပွနျတာမြိုး မဖွဈစဖေို့ သတိအားကောငျးအောငျ ၊ ခိုငျမွဲအောငျ ထူထောငျတဲ့ သတိပဋ်ဌာနျတရားကို ကွိုးစားအားထုတျနဖေို့ လိုပါတယျ ။
သတိပဋ်ဌာနျတရား အားထုတျလို့ သတိမွဲမွံနတေဲ့ သူမြိုးမှာ ဘယျတော့မှ သူငယျမပွနျပါဘူး ။ သခေါနီး အခြိနျမြိုးမှာတောငျ သတိမလှတျတဲ့အတှကျ အလိုရှိရာကို အာရုံပွုထားနိုငျပါတယျ ။ သုဂတိကောငျးရာဘုံကို ရောကျစနေိုငျပါတယျ ။
သတိနဲ့ တရားရှုမှတျရငျး စုတိစိတျကသြှားရငျတော့ ” အနာတဂေ ပစ်စယော ဘဝဿတိ ” လို့ဆိုတဲ့အတိုငျး နောကျဘဝမှာ နတျသားအဖွဈနဲ့ မဂျဖိုလျရနိုငျပါတယျ ။
တှဝေမေိနျးမောပွီး သတောမြိုးမဟုတျလို့ ဝိနိပါတဘေးသငျ့ပွီး ကခြငျြရာကြ ရောကျခငျြရာ ရောကျသှားတာမြိုး မဖွဈတော့ပါဘူး ။
တကယျတော့ သတိပဋ်ဌာနျတရားဟာ သူငယျပွနျတာ မဖွဈစရေုံတငျ မကပါဘူး ၊ လူတှမှောရှိတဲ့ လောဘ ၊ ဒေါသ ၊ မောဟ ကိလသော စိတျအညဈအကွေးတှေ ၊ ပရိဒဝေ သောကမီးတှေ ငွိမျးသတျပေးနိူုငျတဲ့ ကငျြ့စဉျတဈခုပါ ။ သံသရာ ဆငျးရဲ ဒုက်ခတှကေ ကငျးလှတျစဖေို့ ဘုရားရှငျက မဟာကရုဏာတျောနဲ့ ပေးသနားခဲ့တဲ့ ဆေးတဈခှကျပါ ။
ဒီဆေးသောကျလိုကျလို့ ကိုယျ့သန်တာနျမှာရှိတဲ့ လောဘ ဒေါသ မောဟ မာန ကိလသောတှေ အညဈအကွေးတှေ ပြောကျကှယျသှားရငျ အဲဒီနရောမှာ မတ်ေတာ ကရုဏာ မုဒိတာ ဥပက်ေခာစတဲ့ ဗွဟ်မစိုရျတရားတှေ အစားဝငျလာပါလိမျ့မယျ ။
စိတျရှညျသူ ၊ ကိုယျခငျြးစာတရားရှိသူ ၊ မတ်ေတာ ဓာတျရှိသူ ၊ သိမျမှပွေီ့း စိတျနှလုံးတညျကွညျ ဖွောငျ့မတျသူ ၊ မာနျမာန ကငျးရှငျးတဲ့ မောကျမာခွငျးကငျးတဲ့သူ တဈယောကျ ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ ။ ဒီလိုလူမြိုးကိုတော့ လူတိုငျး ခဈြခငျ နှဈသကျကွမှာပါပဲ ။
ဒါဆိုရငျတော့ ကိုယျ့မိသားစု ကို ဝနျထုပျဝနျပိုး ဖွဈစမေဲ့ အထီးကနျြနတေဲ့ လူအိုကွီးတဈယောကျ မဟုတျတော့ဘဲ အားကိုးတိုငျပငျစရာ အဖိုးတနျ အဘိုးကွီး အဘှားကွီးတဈယောကျ ဖွဈလာနိုငျပါလိမျ့မယျ ။
ဒါကွောငျ့ ကိုယျခန်ဓာကိုရော နှလုံးသားကိုပါ အကြိုးပွုတဲ့ သတိပဋ်ဌာနျကငျြ့စဉျ ဝိပဿနာတရားကိုပဲ နောကျဆုံးထှကျသကျအထိ ဖကျတှယျထားဖို့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ ။
ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ပဉ်စမမွောကျ ” ဉာဏျလမျးပျေါ လြှောကျလြှငျ ဉာဏျပါမှ ” စာအုပျပါ ဆောငျးပါးလေးပါ ။
ခြောက်ဆယ်ကျော်ပြီ ဆိုကတည်းက ဇရာရဲ့ အရိပ်အယောင်တွေ ပိုတွေ့လာကြရပြီ ။ ဆံပင်တွေကတော့ ဖြူတာကြာပါပြီ ။ရှေးတုန်းက ဘုရင်တစ်ပါးလို ဆံပင်ဖြူတစ်ချောင်းတွေ့လို့ သံဝေဂရပြီး တောထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ တောတွင်းသားဖြစ်တာ ကြာလှရောပေါ့ ။
ဒါပေမဲ့ သံဝေဂယူမဲ့အစား ဆံပင်နက်ဆေးလေးဆိုး၊ အဆင်နုနုလေးတွေဝတ်ပြီး ”မအိုသေးတဲ့လူ.. လူပျိုလေးနဲ့တူ” ဆိုပြီး ဇရာကို လှည့်စားခဲ့တာပါပဲလေ ။
အခုတော့ ဆံပင်တင်မက မျက်ခုံးမွှေးတွေပါ ဖြူလာပြီ ။ ဇရာကို လိမ်ဖို့ခက်လာပြီ ။ မျက်ခုံးမွှေးဆိုတာ ဆေးဆိုးလို့မှ မရပဲလေ ။ ဆိုးရင်တော့ အမျိုးသမီးတွေ မျက်ခုံးမွှေးဆွဲထားသလို ဖြစ်သွားမှာပါပဲ ။
လူကလည်း အားအင်ဆုတ်ယုတ်လို့ ချည့်နဲ့နဲ့ ဖြစ်လာပြီ ။ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါတော့ ။ အိုမင်းမစွမ်းဆိုတာ အိုလာရင် မင်းမစွမ်းတော့ဘူးလို့ ဆိုလိုမှန်း သိလာပြီ ။
ဇရာရဲ့ အပေါ်ယံသွင်ပြင် လက္ခဏာတွေကို ဘယ်လိုပဲ ဖုံးကွယ် ဖုံးကွယ် ၊ ပြုပြင် ပြုပြင် ဇရာဆိုတဲ့ အိုမင်းခြင်းဟာ ဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဆိုတော့ မလွဲမသွေ ရောက်လာမှာပါပဲ ။
ဇာတိ ဇရာ မရဏ ဆိုတာ လောကဓမ္မတာ မဟုတ်လား ။ ဘုရား ရဟန္တာတောင် ရှောင်လွှဲလို့ မရဘူးလေ ။ဒီတော့ ကိုယ်လည်း အိုရမှာ အသေအချာပဲပေါ့ ။ ဒါ ကြောင့် ဇရာကို ရှောင်ပုန်းနေမဲ့အစား ရင်ဆိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ ။
ဇရာအိုပေမဲ့လည်း နေညိုချိန်မှာ တင့်တင့်တယ်တယ် နေနိုင်ဖို့ ၊ ဇရာဒုဗ္ဗလအရွယ်မှာ စိတ်ရှင်သန် လန်းဆန်းနေဖို့ ငါအိုပြီဆိုတာကို မှန်မှန်ကန်ကန် လက်ခံနိုင်ဖို့လိုပါတယ် ။
အမတ်တွေ အလျော့ပေး မြှောက်ပေးတာကို အဟုတ်မှတ်သွားတဲ့ အလောင်းစည်သူမင်းကြီးလို လက်ရုံးတော်ဆန့်တန်းပြီး ”…ငါမအိုသေး ”လို့ ကြုံးဝါးနေလို့ မဖြစ်ပါဘူး ။ လက်ပျဉ်းတော်တွဲကျနေတာကို ကြည့်ကြပြီး ရယ်ခိုးဖွဲ့ ခံရမှာပါပဲ ။
ရှိခဲ့တဲ့ အခွင့်အာဏာကို မစွန့်ချင်လို့ သားသမီးတွေကို ဟိုလူ့မာန် ဒီလူ့မဲ လုပ်နေရင် ၊ ရွှေထီးဆောင်းခဲ့တဲ့ အတိတ်အကြောင်းတွေကိုပဲ ထပ်တလဲလဲ ပြောနေရင် ၊ ဘယ်ပြဿနာမျိုးမဆို ကိုယ်သာဖြေရှင်းနိုင်တယ်လို့ စိတ်ကြီးဝင်နေရင်တော့ လူတွေနဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ကို ဝေးဝေးရှောင်ကြမှာပါပဲ ။
အထီးကျန်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ ဇရာရဲ့ အကြီးဆုံး ဒုက္ခကို ရင်ဆိုင်သွားရနိုင်ပါတယ် ။ ဒီတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲ ဗဟိုပြုမနေမှ ၊ နေရာတိုင်း ဝင်ပါပြီး သြဇာပေးတာတွေကို ဆင်ခြင်မှ လူတွေနဲ့ အဆင်ပြေပြေ ဆက်ဆံနိုင်ပြီး အထီးကျန်ဒုက္ခက လွတ်ကင်းမှာပါ ။
ပြီးတော့ လူတွေကြားထဲ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေမဲ့အစား တစ်ဦးတည်း ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နေရတဲ့ အရသာကို သဘောကျတတ်ဖို့လည်း လိုပါတယ် ။အေးချမ်းဆိတ်ငြိမ်တဲ့ နေရာလေးမှာ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ စာလေး အေးအေးဆေးဆေးဖတ်ရင်း ၊ စာလေးရေးရင်းနဲ့ပေါ့ ။
ကဗျာတို့ ၊ စာပေ ဂီတတို့မှာ စိတ်ဝင်စားတတ်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ စာပေနဲ့ဂီတက ဇရာကြောင့် အိုမင်းရွတ်တွ အကျည်းတန်နေတဲ့ လက်ရှိကမ္ဘာကနေ သာယာဆန်းကြယ်တဲ့ ကမ္ဘာသစ်ဆီကို ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သတဲ့ ။
ဇရာမှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကတော့ သတိမေ့လျော့လာတာပါပဲ ။ ငယ်ငယ်က ဉာဏ်ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းခဲ့ ကောင်းခဲ့ အခုတော့ ဟိုမေ့ဒီမေ့ ဖြစ်စပြုနေပြီ ။
ဇရာရဲ့ ဒဏ်ချက်ကြောင့် ဦးနှောက်ကလပ်စည်းတွေ ယိုယွင်းပျက်စီးစ ပြုလာပြီ မဟုတ်လား ။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မရှိရင်တော့ သူငယ်ပြန်တာမျိုး ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် ။
တချို့ သက်ကြီးရွယ်အိုကြီးတွေ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ စကားတွေကို အရှက်အကြောက်မရှိ ပရမ်းပတာ ပြောလိုပြော ၊ မတော်မလျော်တွေ ဝတ်စားလိုဝတ်စားနဲ့ ဖြစ်လာရင် သူငယ်ပြန်ပြီဆိုပြီး လူတွေကဲ့ရဲ့တတ်ကြပါတယ် ။
တချို့ကတော့ စားပြီးသားကို မေ့လျော့သွားပြီး မစားရသေးဘူး ပြောရုံ ၊ ပြောပြီးသား စကားတွေကို ထပ်တလဲလဲ ပြောရုံလောက် သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ သူငယ်ပြန်ပေမဲ့ တချို့ကျတော့ ကလေးတွေနဲ့ ရောနှောပြီး အိုးပုတ် ချိုးရုပ်တွေနဲ့ ကစားလိုကစား ၊ အလိုမပြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာ ကလေးလိုပဲ ခြေဆင်းလူးလှိမ့်ငိုယိုနဲ့ မြင်ရတာကိုက ရွံစရာကြီးပါ ။
မတော်မလျော်တွေပါ လုပ်မယ် ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ပိုဆိုးတော့တာပေါ့ ။
သူငယ်ပြန်တာ အလွန်အကျွံဖြစ်လာတဲ့ သူများဆိုရင် သားတွေ ၊ သမီးတွေကိုလည်း မမှတ်မိတော့ဘူးတဲ့ ။ အလေး. အပေါ့ စွန့်လို့စွန့်မိမှန်းလည်းမသိတော့ဘူးတဲ့ ။အတူနေသူ သားသမီးများအတွက် အတော့်ကို ဒုက္ခများစေမှာပါပဲ ။
သူငယ်ပြန်တယ်လို့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြောကြပေမဲ့ တကယ်တော့ ရူးသွပ်ခြင်း တစ်မျိုးပါပဲ ။ အသက်ကြီးပြီး အိုမင်းရင့်ရော်လာလို့ နာဗ်ကြော အာရုံကြောတွေ ပျက်စီးလာတဲ့အတွက် နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းမှု ဖြစ်လာတာကြောင့်ပါ ။ ဆေးဝါးတွေနဲ့လည်း ကုလို့မရပါဘူး ။
သူငယ်ပြန်တယ်ဆိုတာ အလွန်ရှက်စရာ ကြောက်စရာ ကောင်းပါတယ် ။ ဒါကြောင့် သူငယ်ပြန်တဲ့ အဖြစ်ဆိုးနဲ့ ကင်းဝေးအောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမှာပါပဲ ။
ငယ်စဉ်တုန်းက မူးယစ်ဆေးဝါး အရက်သေစာ မှီဝဲခဲ့လို့ရှိရင် အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်လာတဲ့အခါ သူငယ်ပြန်တတ်သတဲ့ ။ နောက်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့လာပွားများမှု မရှိရင်လည်း သူငယ်ပြန်တတ်သတဲ့ ။
ဒါကြောင့် ကြိုတင်ပြီး ရှောင်စရာရှိတာရှောင် ၊ ဆောင်စရာရှိတာဆောင်ဖို့ လိုပါတယ် ။
”သတိပဋ္ဌာန်တရား ပွားများလျှင် သတိမေ့လျော့ခြင်း ၊ သူငယ်ပြန်ခြင်း မဖြစ်နိုင် ” လို့ အမရပူရမြို့ ၊ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ အရှင်ဇနကာဘိဝံသက မိန့်ကြားခဲ့ဖူးပါတယ် ။
သူငယ်ပြန်တယ်ဆိုတာ လူ့လောကမှာ ရှက်စရာ ရွံရှာစရာတင်မကပါဘူး နောက်ဆုံး ဘဝတုံးတဲ့အထိ တွေတွေဝေဝေနဲ့ ဇာတ်သိမ်းသွားတတ်ပါတယ် ။
ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်း လုပ်ဖို့ မလွယ်တော့ပါဘူး ။ တွေဝေမိန်းမောပြီး သေမှာဆိုတော့ ကောင်းရာသုဂတိရောက်နိုင်ဖို့လည်း မရှိတော့ပါဘူး ။ အပါယ်ဒုဂ္ဂတိသာ ရောက်ရတော့မှာပါ ။ တွေးကြည့်ရင် ကြောက်စရာပါပဲ ။
ဒါကြောင့် သတိမေ့လျော့ခြင်းကို အခြေခံတဲ့ သူငယ်ပြန်တာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ သတိအားကောင်းအောင် ၊ ခိုင်မြဲအောင် ထူထောင်တဲ့ သတိပဋ္ဌာန်တရားကို ကြိုးစားအားထုတ်နေဖို့ လိုပါတယ် ။
သတိပဋ္ဌာန်တရား အားထုတ်လို့ သတိမြဲမြံနေတဲ့ သူမျိုးမှာ ဘယ်တော့မှ သူငယ်မပြန်ပါဘူး ။ သေခါနီး အချိန်မျိုးမှာတောင် သတိမလွတ်တဲ့အတွက် အလိုရှိရာကို အာရုံပြုထားနိုင်ပါတယ် ။ သုဂတိကောင်းရာဘုံကို ရောက်စေနိုင်ပါတယ် ။
သတိနဲ့ တရားရှုမှတ်ရင်း စုတိစိတ်ကျသွားရင်တော့ ” အနာတဂေ ပစ္စယော ဘဝဿတိ ” လို့ဆိုတဲ့အတိုင်း နောက်ဘဝမှာ နတ်သားအဖြစ်နဲ့ မဂ်ဖိုလ်ရနိုင်ပါတယ် ။
တွေဝေမိန်းမောပြီး သေတာမျိုးမဟုတ်လို့ ဝိနိပါတဘေးသင့်ပြီး ကျချင်ရာကျ ရောက်ချင်ရာ ရောက်သွားတာမျိုး မဖြစ်တော့ပါဘူး ။
တကယ်တော့ သတိပဋ္ဌာန်တရားဟာ သူငယ်ပြန်တာ မဖြစ်စေရုံတင် မကပါဘူး ၊ လူတွေမှာရှိတဲ့ လောဘ ၊ ဒေါသ ၊ မောဟ ကိလေသာ စိတ်အညစ်အကြေးတွေ ၊ ပရိဒေဝ သောကမီးတွေ ငြိမ်းသတ်ပေးနိူုင်တဲ့ ကျင့်စဉ်တစ်ခုပါ ။ သံသရာ ဆင်းရဲ ဒုက္ခတွေက ကင်းလွတ်စေဖို့ ဘုရားရှင်က မဟာကရုဏာတော်နဲ့ ပေးသနားခဲ့တဲ့ ဆေးတစ်ခွက်ပါ ။
ဒီဆေးသောက်လိုက်လို့ ကိုယ့်သန္တာန်မှာရှိတဲ့ လောဘ ဒေါသ မောဟ မာန ကိလေသာတွေ အညစ်အကြေးတွေ ပျောက်ကွယ်သွားရင် အဲဒီနေရာမှာ မေတ္တာ ကရုဏာ မုဒိတာ ဥပေက္ခာစတဲ့ ဗြဟ္မစိုရ်တရားတွေ အစားဝင်လာပါလိမ့်မယ် ။
စိတ်ရှည်သူ ၊ ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိသူ ၊ မေတ္တာ ဓာတ်ရှိသူ ၊ သိမ်မွေ့ပြီး စိတ်နှလုံးတည်ကြည် ဖြောင့်မတ်သူ ၊ မာန်မာန ကင်းရှင်းတဲ့ မောက်မာခြင်းကင်းတဲ့သူ တစ်ယောက် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် ။ ဒီလိုလူမျိုးကိုတော့ လူတိုင်း ချစ်ခင် နှစ်သက်ကြမှာပါပဲ ။
ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ့်မိသားစု ကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်စေမဲ့ အထီးကျန်နေတဲ့ လူအိုကြီးတစ်ယောက် မဟုတ်တော့ဘဲ အားကိုးတိုင်ပင်စရာ အဖိုးတန် အဘိုးကြီး အဘွားကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ် ။
ဒါကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာကိုရော နှလုံးသားကိုပါ အကျိုးပြုတဲ့ သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ် ဝိပဿနာတရားကိုပဲ နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိ ဖက်တွယ်ထားဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ပဉ္စမမြောက် ” ဉာဏ်လမ်းပေါ် လျှောက်လျှင် ဉာဏ်ပါမှ ” စာအုပ်ပါ ဆောင်းပါးလေးပါ ။